Missing Pieces: ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ . . . (၁)
putting back together ... missing pieces of my life ...
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ . . . (၁)
အားနေတာမို့ သိချင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေလိုက်ဖတ်ရင်း စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပါ။ ဗဟုသုတရတာပေါ့။ ရှာဖွေတွေ့ရှိတာတွေကတော့ -
ဟမ်ဘာဂါ (Hamburger) လို့ခေါ်သော်လည်း ဘာလို့ ဝက်ပေါင်သား (Ham) မပါသလဲ ?
တကယ်တော့ Hamburger ဆိုတာ ဂျာမန်မြို့ ဟမ်းဘာ့ဂ် (Hamburg) ကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ စကားလုံးပါ။ ဂျာမနီနိုင်ငံက ဂျာမန်လူမျိုးများ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရာကနေ အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုထဲကိုပါ ကူးစက်လာတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ ထို့ကြောင့် ဟမ်ဘာဂါအများစုက ဝက်ပေါင်သား(Ham) မပါဘဲ အမဲသားကိုသာအသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ Hotdog လို့ခေါ်ကြသလဲ ?
Hotdog လို့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဘယ်ကပေါ်လာလည်းပြောရရင် ဂျာမနီနိုင်ငံကိုပဲ စပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hotdog ထဲမှာပါတဲ့ ဝက်အူချောင်း ကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖတ်မြို့ မှ Dachshund ခွေးပိုင်ရှင် အသားဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်က Dachshund Sausage လို့ခေါ်ရာက စခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ Dachshund ခွေးဆိုတာ ရှည်မျောမျော ခွေးပါ။ အဲဒါကြောင့်မလို့ ဝက်အူချောင်းကို Dachshund Sausage လို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၁၈၇၁ မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုး Charles Feltman ကနေစပြီး Dachshund Sausage ကို စပြီး Hotdog Stand နဲ့ရောင်းပါတယ်။ အဲနောက်ပိုင်း ဝက်အူချောင်းကို ပေါင်မုန့်ကြားညှပ်တာပေါ်လာပြီး Hotdog ဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါ။ ဂျာမန်နိုင်ငံ Frankfurt မြို့ကစတာမလို့ Frankfurter လို့လဲခေါ်ကြပါသတဲ့။
ဒီကောင်လေးကို Dachshund လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ပုံနဲ့တူလို့ ဝက်အူချောင်းက Dachshund Sausage လို့ဖြစ်သွားတာပါ -
April Fool ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ?
April Fool နေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၁၅၆၂ခုနှစ်ခန့်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gregory XIII က Julian Calender ကို ယခုသုံးနေတဲ့ Gregorian Calendar နဲ့ အစားထိုးရာကနေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Gregorian Calendar ကိုစသုံးတဲ့ရက်က Julian Calendar ရဲ့ April 1 ပါ။ ထိုရက်ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ Gregorian Calendar ရဲ့ January 1 နဲ့အစားထိုးလိုက်ပါသတဲ့။ အဲဒါကို တစ်ချို့လူတွေက ရက်ပြောင်းတာကို မသိဘဲ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေပါသတဲ့။ နှစ်သစ်ပွဲ ကျင်းပရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပေမယ့် အဲအချိန်ကို ဧပြီလလို့ပဲထင်နေကြလို့ပါ။ အဲလိုလူတွေကို တခြားသူတွေက April Fools လို့နောက်ပြောင်ခေါ်ရင်း နဲ့ April Fool Day ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။
Brought to you by နေတိုက်ရှိန်း at 1:14 PM
Labels: ထူးထူးခြားခြား, ဗဟုသုတ
သြစတေးလျ အိုးပင်း အမျိုးသားပြိုင်ပွဲ ရော်ဂျာ ဖက်ဒရ...
ဖြစ်ချင်ဦးဟဲ့ အင်ဂျင်နီယာ . . . (၃)
သြစတေးလျ အတွေ့အကြုံများ (၁)
ကားလင်းဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယပွဲစဉ် ဒုတိယအကျော့
ဖြစ်ချင်ဦးဟဲ့ အင်ဂျင်နီယာ . . . (၂)
အနက်ရောင် စာမျက်နှာ နှင့် ကျွန်တော်
ဖြစ်ချင်ဦးဟဲ့ အင်ဂျင်နီယာ . . . (၁)
Phobia သို့မဟုတ် ကြောက်စိတ်
မန်ယူ ၄-၀ ဟောလ်စီးတီး
ဟေတီငလျင်ဒဏ်ကြောင့် လူပေါင်း ၁၁၀ ၀၀၀ ကျော်သေဆုံး
သြစတေးလျ တက္ကသိုလ်များ . . . အပိုင်း (၄)
ပြောပြမယ် ထူးထူးဆန်းဆန်း (၃)
လူအသုံးအများဆုံး Password ၁၀ခု
Patapon2(PSP) Review
Top Ten - 22 Jan
Dragon Age: Origins (PC) Review
မှတ်ဖွယ်ရာရာ အဆိုအမိန့်များ . . . (၁)
ပြောပြမယ် ထူးထူးဆန်းဆန်း (၂)
ပြောပြမယ် ထူးထူးဆန်းဆန်း (၁)
ဟေတီနိုင်ငံတွင် အင်အားပြင်းထန်သော ငလျင်ထပ်လှုပ်
သြစတေးလျ တက္ကသိုလ်များ . . . အပိုင်း (၃)
ကားလင်းဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယပွဲစဉ် ပထမ အကျော့
ပရီးမီးယားလိဒ်ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ် ၂၂ တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲစဉ်...
သြစတေးလျ တက္ကသိုလ်များ . . . အပိုင်း(၂)
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည...
မန်ယူ ၃-၀ ဘန်လေ
မန်ယူအသင်း ဘန်လေကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရ
ကုလသမဂ္ဂမှ ဟေတီဒုက္ခသည်များအတွက် လှုဒါန်းမည်
ကားလင်းဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပထမအကျော့ ပထမပွဲစဉ်
ဆယ်ကျော်သက် အကျင့်ဆိုး (၇)ခု
သြစတေးလျ တက္ကသိုလ်များ . . . အပိုင်း(၁)
ပက်ထရစ် ဗီအာရာ မန်စီးတီး အသင်းသို့ ရောက်တော့မည်
ဗီဒစ် သည် မန်ယူအသင်းမှ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလအတ...
“ အားလုံးပဲ ကျွန်တော့်ဘလော့ကို လာဖတ်ကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကြံဥာဏ်တွေလည်းပေးကြပါ။ နောင်လည်း ခဏခဏလာလည်ကြပါ။
Meals for You ♥
An nyoung ha seh yo ♥ Korean Kimbap (Normal)
If you can't read the content of my blog, you can download Zawgyi Myanmar font from the following links.